Gabriella Laberge ndiani? Zvese nezve violinist uyo akagashirwa akamira paAGT nekuita kwake kwaJames Blunt 'Kwakanaka Mudiwa Wangu' - Pop-Tsika
Gabriella Laberge ndiani? Zvese nezve violinist uyo akagashirwa akamira paAGT nekuita kwake kwaJames Blunt 'Kwakanaka Mudiwa Wangu'
Gabriella Laberge ndiye achangokwikwidza kukwikwidza vatongi mumwaka uri kuenderera weAmerica's Got Talent. Iye violinist akasiya iyo vatongi mukutya mushure mekuita kududzira kwakanaka kwaJames Blunt's 'Mufananidza Mudiwa Wangu.'
Nekudaro, ino haisi nguva yekutanga Gabriella kukunda vateereri. Vataridzi veIzwi vaigona kurangarira muimbi kubva mukuyeukwa kwake kwekunzwika kwemwaka wechishanu weThe Voice France.
Gabriella Laberge akaonekwa pane yekuimba chaiyo show mu2016. Akaita kavha yakasarudzika yeColdplay's The Scientist muma blind auditions uye akasarudzwa nevatongi vese veThe Voice France.
Iine anodarika mamirioni makumi manomwe ekuona, vhidhiyo yaGabriella yekuongorora ndeimwe yemapikicha anozivikanwa kubva kuIzwi sarudzo. Muimbi akapedzisira awana mukurumbira wakakura kuburikidza nerwendo rwake pachiratidzo chaicho.
kutamba sei nesimba kuti upinde muhukama
Akabudirira kuhwina vateereri vake zvakare, achiwana zororo kubva kune vese vana SERE vatongi. Gabriella Laberge anogona kufambira mberi mumakwikwi.
Uyezve Verenga: Sarah Potenza ndiani? Zvese nezveaimbove mukwikwidzi we'Izwi 'uyo akagashira kumira paAGT nekushandurwa kwake kwaMary Gauthier' Akakodzera '
Gabriella Laberge ndiani?
Gabriella Laberge mutambi wechiFrench -Canada violinist uye muimbi anogara muMontreal, Canada. Akazvarwa muna Chivabvu 20, 1993, Gabriella akatanga kuridza violin pazera diki rechitanhatu. Akatanga kuimba aine makore gumi nerimwe chete ekuberekwa.
Ndichikura, Gabriella akatora hunyanzvi hwekudzidzisa mumhanzi, kuumbwa uye kurekodha kwemakore matatu. Akadzidzawo kuridza gitare nepiyano, uye parizvino anoita seanoridza zviridzwa uye muimbi.
Iye ane makore makumi maviri nemasere akaenderera mberi nekuita mumatanho akati wandei uye akaburitsa yake yekutanga EP Kunyange iyo Oak muna 2015. Akaburitsawo yake yekutanga dambarefu Nyaya ye Oak uye Leafless gore rimwe chete.
Gore rakatevera akaongorora kuThe Voice France.
Gabriella Laberge akasimuka kuita mukurumbira mushure mekunge clip yake yekuongorora kubva kuIzwi yaenda hutachiona. Izvo zvakamuwanira iye akakosha fanbase mukati nekunze kweFrance. Gabriella akakodzera kumakwikwi ehondo achiimba Iyo Avener's castle muChando.
Iye anorangarirwawo neiko risingakanganwike chifukidziro cheMakumi maviri Imwe Mutyairi Wakamanikidzwa kunze mumashoo anorarama. Nhamo Gabriella akabviswa kuThe Voice France quarterfinals asi akasiya show mushure mekuzviitira zita muindastiri.
Muimbi akaenderera mberi nekushanda pane zvake nziyo dzekuzvinyora. Nziyo dzake dzaionekwawo mumitambo yeTV saLance et Compte uye Mohawk Vasikana. Muna 2018, Gabriella akasaina naPolydor France ndokuburitsa yekutanga Tu es Flou yeyechipiri album.
Muna 2019, Gabriella Laberge akamiririra France muKukwikwidza kweEurovision 2019 makwikwi. Akanakidza vateereri paaiita yake yepakutanga nhamba Usambofa Wakwana.
Akaburitsawo yake yechipiri album Kunze mugore rimwe chetero.
Gabriella akatanga zvakare yake YouTube chiteshi. Akatowana rutsigiro rwakawanda papuratifomu uye parizvino ane vanopfuura 305K vanyori. Iye zvakare ane yakasimbiswa Instagram account ine vangangoita 49K vateveri.
Uyezve Verenga: Matt Mauser ndiani? Zvese nezve muimbi ane nyaya inoshungurudza pamusoro pemukadzi wake, Christina, akasiya vatongi veAGT vachishushikana
Gabriella Laberge pane yake AGT kuongorora
Mune pre-akateedzera vhidhiyo kubva kuAmerica's Got Talent, Gabriella Laberge akagovana kuti kuita pachiratidziro wave mukana weupenyu kwaari:
Ndichikura ndaiona America's Got Talent vhiki yega yega saka never muhupenyu hwangu ndaizotarisira kuve pano. Uyu ndiwo mukana wehupenyu hwangu kudzingirira kurota kwangu kukuru kuri kuita mimhanzi kwehupenyu hwangu hwese.
Mutambi wacho akashamisika vatongi vachangobva kurova tsamba yekutanga pavhayolini yake. Akakwaziswawo nemufaro mukuru kubva kune vateereri achangotanga kuimba mitsara yekutanga yerwiyo.
kuwirirana nemurume wako mushure mekurwa
Chinyorwa chakagovaniswa naGabriella (@ gabriella.mu)
Vatongi vakashama muromo uye vakasimuka pamwe chete kuombera muimbi wemimhanzi iye achichema misodzi yemufaro. Kuita kwakazara kwaGabriella Laberge kuchave kuri kuwanika muchikamu chiri kuuya che SERE auditions neChipiri, Chikunguru 20th, 2021.
Uyezve Verenga: Ndiani Hello hanzvadzi? Zvese nezve trio yemukoma ane rwiyo rwekutanga 'Middle Schooler' akasiya vatongi veAGT vafadzwa
mameseji mushure mekutanga meseji meseji
sei vakomana vachisuduruka mushure mekuswedera padhuze
sei kuvhara pasina kusangana
ndinofunga mukomana wangu anogona kunge ari ngochani
ndinga vimba newe sei futi